The Irrawaddy's Blog: နတ်ပိုက်ဆံနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်ပြီ
နတ်ပိုက်ဆံနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်ပြီ
ဟုတ်ပါတယ်၊ နတ်ပိုက်ဆံ တဲ့။ နာမည်က အင်မတန် လန်းသလို သုံးစွဲရတာလည်း အင်မတန် အဆင်ပြေဖွယ် ရှိပါတယ်။ipay ကတ် ၀ယ်ပြီး ဘတ်စ်ကား စီး၊ ကားခပေးနိုင်ပြီ ဆိုတော့ ကြော်ငြာထားသလို အကြွေမရှိ၊ အကြွေမကိုင်ချင်တဲ့သူတွေ စိတ်ချမ်းသာပြီပေါ့။စပယ်ယာ ပိုက်ဆံပြန်မအမ်းတာ ပူစရာမလိုတော့သလို၊ လူတကာကိုင်တွယ်ထားတဲ့ အကြွေကိုလည်း စိတ်မသက်သာစွာနဲ့ ခဏခဏ ကိုင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။နတ်ပိုက်ဆံ စိတ်ကူးကို ကစ္စပနဒီကုမ္ပဏီက အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်၊ ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေအားလုံးမှာ ဒီစနစ်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းနေတယ် တဲ့။(နတ်ပိုက်ဆံကိုပဲ ကိုင်ရမယ်လို့ မဆိုလို၊ ခြင်္သေ့ပိုက်ဆံလည်း ဆက်ပြီး ကိုင်နိုင်ပါတယ် တဲ့)ipay ကတ် စစ်ဆေးတဲ့စက်တွေကို ဘတ်စ်ကားတွေမှာ အခမဲ့ လိုက်တပ်ပေးနေတယ် လို့ အလဲဗင်းမီဒီယာ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ရေးထားပါတယ်။"နှစ်လအတွင်း ရယူတပ်ဆင်မှုမရှိသော ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်မူ နောင်မှတပ်ဆင်မည် ဆိုပါက ၀ယ်ယူတပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်" တဲ့။လောလောဆယ် ဘတ်စ်ကားစီးရာမှာ ဒီကတ် သုံးနိုင်ပြီ ဆိုပေမယ့် အနာဂတ်မှာတော့ တခြားနေရာတွေမှာပါ သုံးနိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကတ်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာများ ဆိုပြီး http://www.ipay.com.mm မှာ ရေးထားတာက - - ဘတ်(စ်)ကား၊ သင်္ဘော၊ တိုးဂိတ်၊ မီးရထား၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ Super Market ဆိုပဲ။ဘဏ်ကတ်ခေတ်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်ခေတ် မရောက်သေးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီကတ်နဲ့ ဈေးဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ ဧရာမ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်လာပါပြီ။"ipay ကတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေစက္ကူပေးချေရာတွင်အကြွေအခက်အခဲကို ပြေလည်စေပါသည်။ငွေပေးချေသည့်အခါတိုင်း ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိကတ်ထဲရှိ ငွေလက်ကျန်ပမာဏနှင့် ပေးချေလိုက်သော ငွေပမာဏကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ipay ကတ်ဖြင့် လွယ်ကူလျင်မြန်တိကျ၍လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ipayကတ်ကို အသုံပြုခြင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နေသော နည်းပညာများကိုလက်တွေ.အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ - ကတ်ကိုသက်တမ်း အကန့် အသတ်မရှိအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ ကတ်တစ်ခါဝယ်ထားရုံဖြင့် ငွေထပ်ဖြည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်" လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီကတ်အကြောင်း စည်းကမ်းချက်တွေကတော့ အချက် ၃၀ ရှိပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေနဲ့ နင်လားငါလားပါပဲ။စည်းကမ်းချက်အမှတ် 27 မှာ ရေးထားတာက "ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများ ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်း ချို့ယွင်းခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုလိုင်းစနစ်များ ရပ်ဆိုင်းချို့ယွင်းခြင်း စသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်း" အတွက် ငွေကြေး / လျော်ကြေး ပြန်ပေးမည်မဟုတ် ဆိုပဲ။ကဲ - နတ်ပိုက်ဆံကို စိတ်ဝင်စားသူများ လေ့လာဖို့ အချက် ၃၀ ကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ipay Card သုံးစွဲသူများလိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ1. Card ၀ယ်ယူပြီးသည်နှင့်နီးစပ်ရာ ipay ဌာနများတွင် Card ၏ မူလလျှို့ဝှက်နံပါတ် 1234 ကို မိမိနှစ်သက်ရာ လျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲရပါမည်။ ယင်းသို့ပြောင်းလဲရာတွင် သုံးစွဲသူ Card ပိုင်ရှင်၏ စိတ်ချလုံခြုံမှုအတွက် ဇီဝဆိုင်ရာ စစ်ဆေး အတည်ပြုချက်များဖြစ်သည့် လက်ဗွေမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာဖတ်ခြင်းနှင့် အခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲမည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို မှတ်မိရန်အတွက် ကိန်းဂဏန်းများထည့်သွင်းပေးခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်များကို ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။2. အကယ်၍ Card ပျက်စီး/ပျောက်ဆုံးခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်၍ ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြား ပါက အထက်ဖော်ပြပါ ဇီဝဆိုင်ရာ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းများပြုလုပ်ထားမှသာလျှင် Card ပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိအတည်ပြု၍ ယင်း Card ကို Black List ထည့်သွင်းပြီး အခြားတစ်စုံတစ်ဦး မှ မသုံးစွဲနိုင်ရန် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း။ Card ရှိ ငွေတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာလျှင် ဆုံးရှုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျပ် ၅၀၀၀ အောက် ငွေကြေးပမာဏကို လျှို့ဝှက်နံပါတ်မလိုဘဲ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။3. Card ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဇီဝဆိုင်ရာ စစ်ဆေးအတည်ပြုချက် ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသည့် Card သုံးစွဲသူများသည် Card ပျက်စီးပျောက်ဆုံးကြောင်းနှင့် အခြားမလိုလားအပ်သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ ကုမ္ပဏီသိ်ု့ အကြောင်းကြားပါက တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု မရှိပါ။ Card ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုချက် ရယူရာတွင် ဇီဝဆိုင်ရာစစ်ဆေး အတည်ပြုချက်များ နှင့်အတူ Card ပိုင်ရှင်၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာတို့ကို တစ်ပါတည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Card သုံးစွဲသူသည် အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များအပြင် မိမိ၏ ရုံးဖုန်း ၊ အိမ်ဖုန်း ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ မီတာအမှတ်၊ ရေမီတာအမှတ်၊ အစရှိသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း တစ်ပါတည်း ဖြည့်စွက် ပေးအပ်နိုင်ခြင်း။ ယင်းသို့ ပေးအပ်ထားခြင်းအတွက် Card ပိုင်ရှင်များသည် အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ ကုမ္ပဏီမှ ကမ်းလှမ်းမည့် - မီတာခွန် ၊ ရေခွန်၊ ဖုန်း Bill - စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါသည်။4. Card သုံးစွဲသူသည် Card တွင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၇၀၀ ထည့်သွင်းမှသာလျှင် Card သုံးစွဲ၍ ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Card လက်ကျန်ငွေ ကျပ် ၁၀၀ အောက်ဖြစ်ပါက Card သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ပါ။ Card သုံးစွဲရန်အတွက် ကားပေါ်ရှိ ယာဉ်နောက်လိုက်ထံတွင် သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ ipay Station များတွင် ကျပ် ၇၀၀ မှ စတင်၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ ၊ ကျပ် ၂၀၀၀၊ စသည်ဖြင့် အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ ငွေပမာဏကို Card တွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Card အသစ်ဝယ်လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၇၀၀ ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရှိပြီး Card အား ကျပ် ၁၀၀၀ မှစတင်၍ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Card တွင် စုစုပေါင်း ကျပ်ငွေ တစ်သိန်းထက် ပိုထည့်၍ မရပါ။5. Card တွင် ငွေပမာဏ ကျပ် ၁၀၀၀ မှ စ၍ ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်၊ နီးစပ်ရာ ipay Station များတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Card တွင် အများဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ငွေပမာဏမှာ ကျပ်တစ်သိန်း အထိဖြစ်ရာ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် Card ရှိငွေတန်ဖိုးကို အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းပြည့်သည်အထိ ထည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။ Card သုံးစွဲရန်အတွက် သုံးစွဲသူတစ်ဦးလျှင် Card တစ်ခုဖြင့် သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ Card တစ်ခုဖြင့် သုံးစွဲသူ တစ်ဦးထက်ပို၍ သုံးစွဲနိုင်ခွင့်မရှိပါ။ မိမိသုံးစွဲသည့် Card ကို အခြားသူတစ်ဦး၏ ယာဉ်စီးခ အတွက် ပေးချေနိုင်ခွင့် မရှိပါ။6. Card သုံးစွဲသူ၏ စိတ်ချလုံခြုံရေးအတွက် စီးနင်းလိုက်ပါမည့် ယာဉ်ပေါ်တွင် Card ကိုအသုံးပြုပြီး ၈ မိနစ်ပြည့်သည်အထိ အဆိုပါယာဉ်ပေါ်တွင် ထပ်မံသုံးစွဲ၍ မရနိုင်ပါ။သို့ရာတွင် အဆိုပါယာဉ်မှ အခြားယာဉ်တစ်စီးပေါ်သို့ ဖြစ်စေ ၊ အခြားတစ်နေရာသို့ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲပြီးပါက ချက်ချင်းသုံးစွဲနိုင် ပါသည်။ Card ပျက်စီး / ပျောက်ဆုံးမှုအပါအ၀င် Card နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းအားလုံးတို့ကို Card ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မှ လွဲ၍ Card ပိုင်ရှင် မဟုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း၊ သို့မဟုတ် Card ပိုင်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော / မသက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း မည်သူပင်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိပါ။7. Card သုံးစွဲသူ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကျပ်ငွေ ငါးထောင်နှင့် အထက်ကို Card ဖြင့် ငွေပေးချေရာတွင် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အသုံးပြုရပါမည်။ ကျပ်ငွေငါးထောင်အောက်အတွက် Card ဖြင့် ငွေပေးချေရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် မလိုအပ်ပါ။ သို့ရာတွင် လုံခြုံရေးအရ တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Card သုံးစွဲသူသည့် ယာဉ်စီးခပေးချေပြီးတိုင်း မိမိရရှိသည့် ဖြတ်ပိုင်းတွင် ပါရှိသည့် ယာဉ်စီးခ၊ လက်ကျန်ငွေပမာဏစသည်တို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။။8. Card ပိုင်ရှင်သည် Card ကို ထုတ်ယူပြီး သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးသုံးစွဲသည့် နေ့မှ စတင်၍ ၃ လ အထိ အသုံးမပြုဘဲထားရှိခဲ့ပါက locked ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲ၍ မရနိုင်တော့ပါ။ အဆိုပါ Card သည် Black List စာရင်းဝင်မဟုတ်သော Card ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီမှ Card ပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး အတည် ပြုထားပြီးသည့် Card ဖြစ်ပါက၊ Card ပိုင်ရှင်သည် နီးစပ်ရာ ipay Centre တွင် ယင်း Card ကို ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် အတွက် unlocked ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။9. Card ပိုင်ရှင်သည် ၀ယ်ယူသုံးစွဲသည့် Card အား ပျက်စီးခြင်း ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခိုးခံရခြင်းများ မဖြစ်စေရန်အတွက် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ Card အားလေးလံသည့်အရာဖြင့်ဖိခြင်း၊ ချိုးခြင်း ၊ကွေးကောက်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်း၊ ပူပြင်းသည့်နေရောင်အောက် နှင့် နေရာများတွင်ထားရှိခြင်းစသည်တို့ လုံးဝမပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ Card အား သူတစ်ပါးအား လွှဲပြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခွင့်မပြုရန် ၊ မိမိ၏ လျှို့ဝှက် နံပါတ်ကို အခြားသူမှ မသိရှိနိုင်စေရန် အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန်အထူးလိုအပ် ပါသည်။10. မိမိသုံးစွဲသည့် Card ပျောက်ဆုံးခြင်း ၊ အခိုးခံရခြင်း သို့မဟုတ် မရှောင်လွဲနိုင်သည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်(ဥပမာ - မီးဘေး )စသည့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လျှင် ကုမ္ပဏီသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ပါသည်။ Card ပျက်စီး ၊ ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားပါက Card တွင် ကျန်ရှိသည့် ငွေပမာဏအနည်းအများပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။11. Card ပိုင်ရှင်မှ ပျက်စီး / ပျောက်ဆုံးခြင်းစသည့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားသည့် Card ကို Black List အဖြစ် စာရင်းသွင်းသတ်မှတ်ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြု၍ မရနိုင်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုနေသည့် ipay စက်အားလုံးသို့ Black List စာရင်းသွင်းရန်အတွက် ၇၂ နာရီ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။12. သို့ရာတွင် Card ပျောက်ဆုံးမှုကို ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းမကြားခဲ့ပါက၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က ယင်း Card ကိုရရှိအသုံးပြုနေခဲ့လျှင် Card ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ငွေပမာဏ ကျပ် ၅၀၀၀ အောက်ကို လျှို့ဝှက်နံပါတ်မလိုဘဲ သုံးစွဲနိုင်သည့်အတွက် အချို့ငွေပမာဏမှာ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ပျက်စီး / ပျောက်ဆုံး၍ ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားသည့် Card ကို Black List သို့ စာရင်းသွင်းပြီး Card အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်/သုံးစွဲရန်အတွက် ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်ချက်များကိုစီစစ်ပြီး၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ လိုအပ်သကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။13. Card ပျက်စီး/ပျောက်ဆုံးသွားပါက Card အသစ်ကို ကုမ္ပဏီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထပ်မံ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲရပါမည်။ မိမိသုံးစွဲသည့် Card ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊သူတစ်ပါးအားပေး၍ ဖြစ်စေ၊ တနည်းနည်းဖြင့်ပျက်စီး အောင် မပြုလုပ်နိုင်စေရန် Card ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ယူရပါမည်။14. Card တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များ၊ ငွေတန်ဖိုးများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ထပ်မံပုံနှိပ်ခြင်း ၊ Card မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Card ပေါ်ရှိ ကုမ္ပဏီအမည် ၊ Logo ၊ Trade Mark နှင့် ညွှန်ကြားစာ စသည့် ဖော်ပြချက်များကို အစားထိုးပြင်ဆင်လဲလှယ်ခြင်းများကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေ၊ ပြုလုပ်နိုင်ခွင့် မရှိပါ။ အစစ်အမှန်မဟုတ်သော Card များနှင့် ၊ ခိုးယူ၍ ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူထားသော Card များ ၊ တနည်းအားဖြင့် Black List စာရင်းဝင် Card များသည် မည်သည့် ငွေဖြတ်စက်တွင်မှ အသုံးပြု၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။15. အကယ်၍ Card တွင် ပါရှိသော ကိန်းဂဏန်းများ ၊ အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း ၊ Card ကို ဖတ်မရနိုင်ခြင်းစသည်တို့သည် Card သုံးစွဲသူ၏ ထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ့ဆမှုအတွက် မတော်တဆကျိုးပဲ့ ပျက်စီးပြီး ချို့ယွင်းမှုဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါက Card ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အချက်အလက်များကို ကူးယူခြင်း ၊ ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် Mail ဖြင့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ ပေးပို့ခြင်းများကို မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းပင်ဖြစ်စေ၊ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။16. ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါက အဆိုပါပြောင်းလဲသည့်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ၊ မူဝါဒများ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ကို Card သုံးစွဲသူမှ သဘောတူညီပါသည်။ Card သုံးစွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ipay Card ၀န်ဆောင်မှုပေးသူကုမ္ပဏီမှ လက်ရှိနှင့် ထပ်မံထုတ်ပြန်မည့် ညွှန်ကြားချက် ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၊ အသိပေးစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိချက်များအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း Card သုံးစွဲသူမှ သဘောတူညီပါသည်။17.။ Card သုံးစွဲသူများသည် မိမိတို့ မသိရှိဘဲ ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သည့်အလျောက် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းနှင့် အသိပေးစာ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ စသည်တို့ကို ကုမ္ပဏီ Website နှင့် ipay Station များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ အဆိုပါ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲသည့် ထုတ်ပြန်ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်တို့ကို သိရှိသဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Card သုံးစွဲသူသည် မိမိသုံးစွဲသည့် Card ကို ကုမ္ပဏီမှ ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးက ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ရာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု ၊ လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆချက်အရ ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရန် ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းခံခြင်းစသည်တို့ကို သဘောတူလက်ခံပါသည်။18. Card သုံးစွဲသူသည် မိမိသုံးစွဲသည့် Card ကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Black List အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်- အသုံးပြုသည့် Card သည် အစစ်အမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးပျက်စီး သို့မဟုတ် အခိုးခံရ သည်ဟု ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားသည့် Card ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် Card ကို ပျက်စီးရန်ရည်ရွယ်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ထားသည့် Card ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အခြားတစ်စုံတစ်ဦး၏ Card ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ သုံးစွဲခြင်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရှိခြင်း။- အသုံးပြုသည့် Card အား လက်ကျန်ငွေပမာဏသို့မဟုတ် Card တွင်ရှိ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ လုပ်ရပ်များတွေ့ရှိရခြင်း။- အသုံးပြုသည့် Card သည် အသုံးပြုရန်အတွက် မသင့်လျော်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် ကျိုးပဲ့/ကွေးကောက်ပျက်စီးနေခြင်းနှင့် တရားမ၀င်ရယူထားသည့် Card ဖြစ်သည်ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရှိခြင်း၊19. အထက်ဖော်ပြပါ Black List အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် Card များကို ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုပြီး card ရှိ ငွေလက်ကျန်နှင့် အခြားမည်သည့် တောင်းဆိုမှုမျိုးကိုမဆို ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများသည် တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် မရှိပါ။ သို့ရာတွင် အထက်ပါ အချက်အလက်များအရ Black List အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် Card မဟုတ်သော ဇီဝဆိုင်ရာစစ်ဆေးအတည်ပြုချက်ရယူထားပြီးဖြစ်သည့် Card ပိုင်ရှင်၏ ပျက်စီး / ပျောက်ဆုံးနှင့် Card အသုံးပြု၍ ရနိုင်စေရန် unlocked ပြုလုပ်ပေးရန် စသည့် တောင်းဆိုမှုတို့ကို ကုမ္ပဏီမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ လိုအပ်သလို စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။20. အောက်ဖော်ပြပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Card ပိုင်ရှင်မှ ကုမ္ပဏီသို့ ငွေကြေး / လျော်ကြေး ၊ တစ်စုံတစ်ခုတောင်းခံခဲ့ပါက ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီရှိဝန်ထမ်းများမှ ယင်းသို့ တောင်းခံခြင်းအတွက် ပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။21. Card ပျက်စီး/ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ခြင်း ၊ အခိုးခံရခြင်း၊ မိမိ Card ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး မှ အသုံးပြုခြင်း။22. အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် Card ကို ဖတ်မရခြင်း၊ ဟောင်းခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ကျိုးပဲ့ သွားခြင်း၊23. Card ထုတ်ယူပြီး တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် သုံးစွဲရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုဖြစ်ခြင်း။24. Card သုံးစွဲသည့် စနစ်၏ Software သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် System ၏ ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် System တွင် အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်စုံတစ်ခု ချို့ယွင်းပြီး Card သုံးစွဲနိုင်မှု မရှိသည့် ကာလမျိုးဖြစ်ခြင်း။25. ရေကြီးခြင်း ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း ၊အကြောင်းအရင်း တစ်စုံတစ်ရာရှာမရနိုင်သော ကိစ္စမျိုးဖြစ်ခြင်း ၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း။26. နိုင်ငံတော်ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်၊ မူဝါဒ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တရားရုံးမှ ထုတ်ပြန်တားမြစ်ချက်များစသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဥ်းခြင်း။27. ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများ ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်း ချို့ယွင်းခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုလိုင်းစနစ်များ ရပ်ဆိုင်းချို့ယွင်းခြင်း စသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်း။28. ကုမ္ပဏီနှင့်Card သုံးစွဲသူမဟုတ်သော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဥပမာ - သောင်းကျန်းသူများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အဓိကရုန်း ဖြစ်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားခြင်းစသည့် အခြေအနေမျိုးတို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ခြင်း။29. Card ကိုင်ဆောင်သူသည် ကုမ္ပဏီမှလက်ရှိနှင့် အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်း ပုံမှန်ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ၊ မဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ထားချက်များကို ကင်းလွတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။ ipay Card အား ရယူအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ www.ipay.com.mm တွင် ဖော်ပြထားသော လိုက်နာရမည့် အချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သိရှိလိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။30. အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေမျိုးတွင် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးသည် Card ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲခြင်းအား ငြင်းပယ်၊ တားဆီးနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း။- အခိုးခံရခြင်း၊ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခြင်း၊ Black List ဖြစ်ခြင်း အတွက် သတင်းပို့ အကြောင်းကြားထားသည့် Card ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ Card အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိရခြင်း။ Posted in:
သုံးရလွယ် အဆင်ပြေတာ က တော့ အမှန်ပဲ..ဒါပေမဲ့ ယဉ်စီး ခ ယူ တဲ့ အခါ ပိုယူ ပြီး အခိုး. ခံ ရမှာတော့ အမှန် စိုးရိမ်ရတယ်.. အိမ်ဖုန်း ဟန်းဖုန်း ခ တွေ အခိုးခံ နေတာတွေတောင် ပြောင် ပဲ အခိုးခံနေရတာပဲလေ..
မလေးတို့စလုံးတို့မှာ ဒါမျိုးကဒ်တွေ ဘုန်းပေါလအောဝယ်ကိုင်လို့ရတယ်..ဘာကုတ်နံပါတ်တို့ ဇီဝ မှတ်တမ်းတို့မလို..ကလေးကအစ ခွေးကအစသုံးတယ်..ခရစ်တစ်ကဒ် ဘဏ်ကဒ်မှမဟုတ်ပဲ..ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ငွေအကြွေ၁၀ပြားကျန်တဲ့ထိတောင်သုံးလို့ရတယ်..မြန်မာပြည်မှာလက်ကျန်၁၀၀မှဆိုတော့များတာပေါ့ကဒ်တစ်ကဒ် ၁၀၀ လက်ကျန်အနည်းဆုံးရှိမှသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ ကဒ်ပေါင်း၁၀သန်းရောင်းရရင် ဗမာငွေသန်းပေါင်းတစ်ထောင်ဟာ အလကားနေရင်းကဒ်တွေထဲမှာငွေသေဖြစ်နေမယ်..ဒီငွေပမာနနဲ့ဒီကုမ္ပဏီ လည်ပတ်လုပ်စားလို့ရတယ်..နိုင်ငံခြားစတိုင်လုပ်ရင်လည်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့စံချိန်စံညွန်း နည်းစနစ်တွေ မှီအောင်လုပ်စေချင်တယ်မလုပ်နိုင်ရင်လည်း ဘာမှမလုပ်တာကောင်းတယ်..ရိုက်စား ဒါမှမဟုတ် ပေမမှီဒေါက်မမှီ စနစ်တွေကိုမြန်မာကြံ့ဖွတ် အစိုးရ ကခွင့်မပြုသင့်ဘူး..နိုင်ငံခြားသားတွေရယ်စရာဖြစ်သွားမယ်..
တဖြေးဖြးတော့တိုးတက်လာမှာပါ၊တို့နိုင်ငံကခုမှစတာလေ၊ မကောင်းပြောနေမယ့်အစားပိုကောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းအ ကြံပြုကြတာပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်၊ သတင်းဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟား..ဟား..ရီရတယ်.ကိုရွေမြန်မာတွေလုပ်လဲစားချင်သေးသူတို့ကိုသူများတွေဘတ်မှာလဲကြောက်သေး..ဂျပန်မှာအဲလိုကတ်တွေကို ယန်းငွေ ၅၀၀ နဲလုပ်လို့ရတယ်..ဘာမှစစ်ဆေးတာတွေမေးမြန်တာတွေသဘောတူတာတွေ..စည်ကမ်းတွေမရှိဘူး..ကတ်ထဲမှာတစ်ပြားမှမကျန်တဲအထိသုံးလို့လဲရတယ်...ကြည်လဲလုပ်ပါအုံး..သထေးဖြစ်နောက်ကျနေအုံးမယ်..သူတို့ကိုယ်သူတို့..တော်တော်ခတ်မှီနေကြပြီးထင်နေတယ်..ဘာမှမသိသေးတဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုလုပ်စားမလို့ပေါ့..
စောင့်ကြည့်ကြပါဦး။နိုင်ငံခြာမှာ ဈေးကွက်မဝင် ရောင်မစွန်တော့တဲ့ out of date တွေကို စွန့်ပစ်ရင် စွန့်ပစ်ခပေးရတယ်။မြန်မာပြည်က ဗိုလ်စုတ်တွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်လိုက်တော့ ဒေါ်လာတွေတောင်ရဆိုပဲ။တရုတ်တွေ စင်ကာပူတွေကတော့ အဲဒီ ဗိုလ်စုတ်တွေကို ပေါင်ရိုက်နည်းနဲ့ တို့မြန်မာပြည်ကို ဓါတုဗေဒနဲ့ နျူးကလီးယား အညစ်အကြေးတွပါ ဈေးပေါပေါနဲ့ တင်ပို့စွန့်ပစ်နေတယ်တဲ့။မြန်မာပြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်တော့ ရွှေထွက်တဲ့ အမှိုက်ပုံဖြစ်နေပြီ။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံကို စက်မှာပဲ ဖော်ပြပေးလို့ မရ၁ာူးလား စက္ကူနဲ့ စလစ်ထုတ်ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ အဲ့စက္ကူတွေ က အပို ဖြစ်မသွားသွားလား အဲ့ဒီစက္ကူတွေကို လူတွေကပြတင်းပေါက်ကနေပြီး ချကြမှာပဲ ဒီတော့ပိုပြီးအမှိုက်မပွ၁ာူးလား နဲနဲတော့စဉ်းစားသင့်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ခိုးစီးရင်ရော ၁ာယ်လိုလုပ်မလဲ ၁ာယ်ကနေ၁ာယ်ကိုစီးရင် ၁ာယ်လောက်ပါဆိုတဲ့ ဟာတွေကိုလဲ မှတ်တိုင်တွေမှာ ရေးပေးထားရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ် အဲ့ဒီပိုက်ဆံပြန်ထည့် ဖို့လဲ မီးရောရှိပါ့မလား လမ်းမီးတွေတောင် တစ်ခါတစ်လေ မလာနိုင်တာကို...စဉ်းစားစေချင်တယ် သေသေချာချာနဲ့ အစစအရာရာကို လုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်...
ဒီ ipay တွေကိုwelcome လုပ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ စက္ကူတွေကို ၁ာယ်လို၇ှင်းမလဲ လူတိုင်း က ၁ာတ်စ်ကားစီးနေကြတာလေ နောက်ပြီးတော့ နတ်ပိုက်ဆံ ဆိုတာကြီးကတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ net လို့ပြောရင်ပိုမကောင်း၁ာူးလားဗျ...
ဟုတ်တယ် CUPIC ရေ၊ နတ်ငွေတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘတ်ငွေပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။